Ny tompon’ny tanimboaloboka, ny mpanompo ary ilay zanakalahy
"Tonga tany amin’ny Azy Izy (Jesosy), fa ny Azy tsy nandray Azy. Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak’Andriamanitra." Jaona 1:11,12
Fanoharana vitsivitsy; Matio 21:33-46
Famintinana: Nisy lehilahy nanao tanimboaloboka. Nampanofainy tamina mpamboly izany, dia lasa tany an-tany hafa izy. Tamin’ny taom-pahavokarana dia naniraka mpanompo izy, mba handray ny vokatra; fa ny mpamboly kosa nikapoka azy ireny, ary namono azy aza. Dia nandefa mpanompo hafa indray ny tompon’ny tanimboaloboka, kanefa nitovy tamin’ireo teo aloha ihany ny nanjo azy ireny. Nony farany dia ny zanany lahy mihitsy no nalefany, nefa mbola novonoin’ireo ihany koa. Voatery ny tompon’ny tanimboaloboka handringana ireo mpamboly ireo, ary hampanofa ny taniny amin’olon-kafa.
Heviny: Ny tanimboaloboka dia maneho ny Zanak’Israely, izay nofidin’Andriamanitra mba ho vavolombelony any amin’ny jentilisa (Isaia 5:7). Ny mpamboly dia ireo mpanapaka teo amin’io vahoaka io; ny mpanompo dia ireo mpaminany; ary ilay zanaka lahy dia Kristy, Izay nolavina sy nohomboana teo amin’ny hazofijaliana. Taorianan’ny nandavana an’i Jesosy, dia naelin’Andriamanitra io firenena io, ka nantsoiny ho vavolombelona ny Fiangonana (ireo mpamboly hafa).
Fampiharana: Ny hoe Fiangonana dia ny fitambaran’ireo rehetra izay mino sy manaiky ny Zanak’Andriamanitra, dia Jesosy Kristy. Ankehitriny ny olona tsirairay dia samy afaka mianatra ny hahafantatra Azy, amin’ny famakiana ny Baiboly, na koa amin’ny fihainoana ny hafatry ny Filazantsara.
Tsy maintsy misafidy ny tsirairay, na hiandany amin’i Jesosy na tsia. Mahazo mandà Azy aho, ka manao tahaka ireo namono Azy tamin’ny hazofijaliana. Fa raha manaiky Azy kosa aho, dia omeny ny fiainana, mba ho tafaray aminy mandrakizay. Andriamanitra dia nametraka an’i Jesosy ho vato fehizoron’ny Fiangonana. Izay fihetsiky ny tsirairay manoloana an’i Kristy, no mampiavaka ny olona : andaniny, ireo izay tia Azy; ankilany, ireo izay mandà Azy. Mpamonjy iretsy voalohany Izy, fa ho Mpitsara ireo hafa kosa.